19 Igumbi lokuhlambela elipinki-Imbali yamagumbi okuhlambela apinki - Amagumbi Okuhlambela
Ezona Zoyilo Zefanitshala Zeiconic Zexesha Lonke
19 Igumbi lokuhlambela elipinki-Imbali yamagumbi okuhlambela apinki
Ngaba uyazi ukuba inde kwaye inomdla Imbali ngasemva kwendawo yokuhlambela epinki ? Ngeminyaka yoo-1950, emva kweMfazwe yesibini (II) yeHlabathi, ipinki yayikukuhamba ngabom kwindlela yokulwa kunye nesidima sombala ongwevu. Inokulandelwa kwakhona emva kweNkosikazi yokuqala uMamie Eisenhower, owadumisa umbala xa wawusebenzisa kwindawo yokuhlala yaseWhite House emva kokuhamba ngo-1953 (enyanisweni, wafumana igama lesidlaliso 'I-Pink Palace'). Namhlanje, kusenokubonakala ngathi lolona khetho lucacileyo lokusebenzisa igumbi lokuhlambela-kodwa abayili abaninzi bayanda pinki , ukuba awuqhubeki ngokuzeleyo imonochrome nayo. Ewe, iipinki zinika iitoni ezahlukeneyo ; ukuba ukhetha i-rose hue enothuli, inokuseta imo yokunxiba kunye nokungaqondakali ngelixa ithoni ye-pastel ikhupha ubumnandi kunye nekorale kwangoko inika amandla indawo. Ukuba awukaqiniseki ngamandla epinki, imizekelo yezindlu zangasese ezipinki ezizayo ziya kukwazisa kuluhlu lwayo, ukusuka kule mihla ukuya ekudlaleni nakwimveli okanye nokuba kubuyiswe umva kunye nelizwe-liphefumlelwe. Qhubeka ufunda ukuze ufumane iskop kwimo yokuhlambela epinki kwaye ubhale phantsi iindlela zakho ozithandayo zokuzisebenzisa, ukusuka kumgangatho ukuya kuthi ga kwisilingi se-bubblegum ithayile imeko okanye ukuyigcina iphantsi kwe-pastel marble engento okanye ukutshiza kweelinen eziluhlaza.
Isibhengezo-Qhubeka nokuFunda apha ngezantsi1 URalph
Kulula ukuziva ubambekile xa uhlobisa igumbi elincinci lomgubo, kodwa indawo encinci inentsikelelo-kuba incinci, ungaphuma ngaphandle kokukhathazeka ngokuba ungaphaya. Thatha eli gumbi lomgubo kwikhaya lika-Ailana Michelle Ralph, umzekelo. Ngombala wodonga opinki okhanyayo kunye negalari ejikeleze ubugcisa be-eclectic, isithuba esincinci esincinci sishiya umbono oqinileyo.
Mbini UVirginia Macdonald
Cinga ngale nto isifundo ekusebenziseni ithambile, ngokungathandekiyo kukho imibala epinki. Ipesika entle kunye neblue lodonga kule U-Anne Hepfer Ibhafu eyiliweyo ibonisa ukujikeleza kombala kwi-marble vanity topper, ukudala umanyano kweli gumbi lincinci lempuphu.
3 Isitudiyo soBomi / isitayile
Ipateni ecocekileyo yokubeka isitayile se-monochromatic bubblegum pink subway tiles kuyamangalisa ukuzola ukujonga. Ukubeka ngokuthe nkqo kule ndawo yokuhlambela kuyilwe Isitudiyo soBomi / isitayile .
4 UHeather Hilliard
Yamkela umbala owuthandayo kwibhafu yomgubo-eli lixesha elifanelekileyo lokuba nesibindi kwaye wenze ibhokisi yegugu. UHeather Hilliard uhambe ne-tangerine kunye ne-fuchsia lodonga apha.
5 UKUGQIBELA JOLIET
Xa ufuna ukusebenzisa imibala emininzi yepinki ngaphandle kokujonga ukudlala kakhulu, okuhamba phambili, okanye ukukhwaza, tsalela i-zellige tile ethobekileyo. Enye yezinto ezininzi ezintle malunga ne-zellige kukuba unokwenza i-cocon tonal enikezela ngeendlela ezahlukeneyo kunethayile ye-cookie-cutter okanye umbala omnye wepeyinti. Njl Ukhethe umnyama wepinki wale shower mosaic kwiFirehouse Hotel eLos Angeles 'ubuGcisa beSithili soBugcisa.
6 Indlu entle
Ukuba le ndawo yokuhlambela yasekhaya ayikwenzi uzive ngathi ungowasebukhosini, asazi ukuba yintoni eza kwenzeka. Ngamatye emarmore aphekiweyo, ii-archways, imigangatho kunye neendonga ukuya kufikelela kwisitulo, ilitye lendalo liluhle ngasemva elizithethelelayo. I-chandelier yekristali ecekeceke yicherry ephezulu, ngelixa isitulo sebubblegum esipinki esingenamsebenzi siqhuba umxholo wepinki ekhaya.
Uyilo oluqhelekileyo ukhethe umbala opeyintiweyo wekorale ophantse usebenze ngokungathathi hlangothi kwesi sithuba. Idityaniswe nezinto eziphefumlelweyo zaphakathi kwenkulungwane kunye nezinye izinto zorhwebo, eli gumbi lokuhlambela lingqina ukuba ezinye iipinki zinokuvuthwa kwaye zisekwe.
8 2LG Studio
Xa unomdla wokwenene wepinki, bonisa ukuzibophelela kwakho kumzuzwana wethayile yomgangatho ophakamileyo. ikwanazo nezinto ezisebenzisekayo, kuba yonke ayinamanzi. Uyilo olusekwe eLondon 2LG Studio yenza ikona engathandekiyo ibe yinto eyoyikisayo ngento engento yesipili kunye nesipili. Masiyibize ngokuba sisiphumo sesipili sekona.
9 Isitudiyo DB
Kwi-2019 ye-Kips Bay yaBafana kunye neQela leeKlabhu zaMantombazana zibonisa indlu, uyilo oluqinileyo Isitudiyo DB kukhanyise imeko kwigumbi lokuhlambela elineekona ezinencasa, ezineelekese. Ukukhanya okumnyama kwiithayile zamatye kuyasebenza ukucima iipinki zothando ngakumbi ukubamba. Ukusuka kwiithayile zomgangatho ukuya kwisconce, amampunge emarmore, kunye nakwibathrobe yothando, iingcambu zeArt Deco zifumana ukujikeleza okwangoku okungaqhelekanga.
Ngaphambi kokuba sifumane ilize, masithethe ngezisombululo zokugcina ezi-smart kule ndawo yokuhlambela yenzelwe Umhlaza kaRobson . Iityhubhu ezisemgangathweni ukuya kuthi ga phezulu zibonelela ngendawo eyaneleyo yokugcina. Tuck iphepha langasese, izinto zokucoca, kunye nokunye okuninzi emva kweengcango ezivaliweyo, emva koko ubonise i-décor yakho kunye neetawuli ezishelfini ezivulekileyo. Amanqaku ebhonasi ukuba ulingisa le tonal suave kunye ne-blush iitawuli kunye nezinto zokuhlamba ukuze ubonakalise iinkozo zomthi weyunithi yokugcina ngokwayo.
iiseti zedinette yezithuba ezincinci
Shumi elinanye Uyilo luka-Elizabeth Roberts kunye noYilo
Enye indlela engalindelekanga yokufaka ipinki? Kwimabhile. Ishawa ebetha kakhulu Uyilo luka-Elizabeth Roberts kunye noYilo kufana nokungena kwizulu lomlingo lekotoni yezulu (leyo ayinamatheli phofu, kuba ayizukunceda kangako kwishawari). Kodwa ngokungathandabuzekiyo, ukuba uyazibuza ukuba ungayisebenzisa njani ipinki kwigumbi lokuhlambela ukuze ijongeke ingapheli kwaye iphakame, ungajongi phambili.
12 UTrevor Tondro
Yigcine iklasikhi nge-bubble gum pink backdrop. Dlala ngemibala enemibala ukwenza iipateni ezinamandla. Le ndlu yangasese ngumzekelo ocacileyo, oxubeka kwithayile emnyama emnyama nomhlophe. Ivakala ngathi i-retro kunye ne-punchy.
13 Isitudiyo DB
Kweli gumbi lomgubo liyilwe ngu Isitudiyo DB , isipili esigobileyo sinceda ukugoba komphezulu wokuntywila. Ngobuninzi beblue pink bulb apha ngasentla, indawo ngumdibaniso ogqibeleleyo phakathi kokuhle kunye nokuhamba. Kwaye ngelixa usenokucinga ukuba ukunyuka kwegolide kuya kuba lukhetho olucacileyo, ukufakwa kwegolide kunye nokuvakala kuyanyikimisa izinto kakuhle.
14 UKUGQIBELA JOLIET
Iikhabhathi ezinombala odlamkileyo we-tangerine kule ndawo yokuhlambela eyilwe yi-ETC. Itera ikhupha i-orange undertones kwilitye lepinki elinamampunge, elidibanisa iithayile zomgangatho wepinki kunye nendawo yombhoxo. Nangona iyancedisa, ukunyuka kweorenji kugqityiwe kwaye akoyiki, ubungqina obungaphezulu bokuba ipinki ikude nokuxubana kwindawo elungileyo.
Shumi elinantlanu Isitudiyo DB
Kweli gumbi lomgubo liyilwe ngu Isitudiyo DB , izivunguvungu ezingwevu, mfusa, pinki nomhlophe ziyonwabisa ngokwenene. Iintyatyambo zephepha lodonga zilinganisa intshukumo yemabhile yokuhombisa kwaye imibala e-pinkish-purplish ikumxholo kodwa ikongeza umdlalo wokudlala. I-turquoise eyahlukileyo iyaphuma, nayo.
16 I-Arent kunye nePyke
Ukuthetha ngokuxuba iithayile, I-Arent kunye nePyke uyazi ukuba kwenzeka ntoni. Iithayile zepenny kwisiqingatha esingaphezulu sodonga zidlala isangqa, ukusuka kwisipili esijikelezileyo ukuya kwizibambo zeenkuni ezijikelezileyo, ngelixa iithayile ezipinki zellige ezixande zibeka igumbi livutha.
17 UNicole Franzen
Ngaba awunakuzibophelela ekukhanyeni okupinki kwigumbi lokuhlambela? Umbala webhloko! Uhlobo lokuguba kwincam yokugqibela, sebenzisa uhlobo olunye lwethayile, kodwa ulophule libe ngamacandelo epinki kunye nomnye umbala owukhethileyo. Apha, Abaqulunqi be-GRT ukhethe i-periwinkle yesinki kunye nendawo engenamsebenzi emva koko yipeyinti emnyama yepenny tile yommandla weshawa. Ipeyinti ye-navy kunye nezinto ezimnyama zidityaniswa ngokumangalisayo.
18 UTom Ferguson
Iithayile zejiyometri ze-angular ezixutywe ngokuchasene nezinto eziphilayo, ezijikelezayo ezithambileyo zohlobo lwe-burgundy-pink marble ezahlukileyo zenza igumbi lokuhlambela elimnandi kodwa elikhazimlisiweyo. Siyayithanda nendlela uArent noPyke abakhethe ngayo ukusonga iikhabhathi ezidadayo kwisakhelo selitye lendalo kunokuba sikunciphise kwinto engento yanto.
19 UFiona Lynch
Kwaye ngoku, ngenxa yegolide enesithsaba yegumbi lokuhlambela elipinki kumjikelo wethu, sikwazisa kulo msebenzi wobugcisa uyilwe ngu UFiona Lynch Studio . Xa igumbi lakho lokuhlambela lisikelelekile ngeglasi enefestile engile yokwenza i-niche enkulu ngokwaneleyo ukuba ibhabhi edadayo, yisebenzise-kufanelekile ukulungiswa kwemibhobho yempembelelo ebonakalayo iyodwa. Isingqengqelo esimbejembeje sentloko siyibeka ngokwahlukileyo.
UHadley Mendelsohn Umhleli oMkhulu UHadley Mendelsohn ngumhleli omkhulu weHouse Beautiful, kwaye xa engaxakekanga ethathela ingqalelo kuzo zonke izinto ezinxulumene nokuhonjiswa, unokumfumana ethengisa iivenkile zokuvuna, efunda, okanye ekhubeka kuba mhlawumbi waphulukana neziglasi zakhe kwakhona.Lo mxholo wenziwe kwaye ugcinwe ngumntu wesithathu, kwaye ungeniswe kweli phepha ukunceda abasebenzisi ukubonelela ngeedilesi zabo ze-imeyile. Unokwazi ukufumana ulwazi oluthe kratya malunga noku kunye nomxholo ofanayo kwipiyano.io Intengiso-Qhubeka nokuFunda apha ngezantsi
Iintsingiselo zePillow - Zithini Iibhedi zakho zeBhedi Ngawe
Elona Iconic UFrank Lloyd Wright Ikhaya phantse kuwo onke amazwe eMelika.
Iingcamango zeKhabinethi eNtsundu ezingama-21 - iikhabhathi eziMnyama kunye neebhodi
'Abahlobo' baPhambili beziqendu zokubulela ngalo lonke ixesha- 'Abahlobo' Indawo yokuBonga yeXesha
Imidlalo yokuCoca e-8 eyonwabisayo yokudlala nabantwana bakho-Imisebenzi yasekhaya
Ukunciphisa ikhaya lakho -Indlela yokunciphisa indlu yakho
Kutheni ufuna ukuzama izinto eziPinki zoMmangaliso zokuCoca ukuCola
Iingcamango ezili-10 zomgangatho wegumbi lokuhlambela-Iindidi zeMigangatho yokuhlambela
Ihelikopta eNtofontofo ebhedi yaBantwana iya kuxabisa ubuncinci i- $ 35k
I-19 yeeKhadi zeNdawo yokuBonga ka-DIY-iiNdawo eziLula zeKhadi
5 Ukuhlaziywa kweKhitshi ngexabiso eliphantsi eliya kuguqula indawo ediniweyo -Iimbono zeKhitshi yoHlahlo-lwabiwo mali
Eyona mibala ipeyinti ingwevu- Imibala ephezulu yePeyinti eNgrey
Ngubani uHilary Farr? -Iinyani ezili-10 malunga ne-HGTV's 'Yithande okanye uyiFakele uluhlu'
Umququzeleli wengxowa yekhabethe
Imifanekiso yethayile yomgangatho wasekhitshini
uhlobo lwezitayile zezindlu